Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa irratti tankaarfii cimaa fudhachuu qaba jedhu Miseensonni Paarlaamaa Awurooppaa - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa irratti tankaarfii cimaa fudhachuu qaba jedhu Miseensonni Paarlaamaa Awurooppaa
Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa irratti tankaarfii cimaa fudhachuu qaba jedhu Miseensonni Paarlaamaa Awurooppaa
Marii guyyaa har’aa taasisaniin Miseensonni Paarlaamaa Awurooppaa Gamtaa Awurooppaa balaaleffatan; Imaammata Itoophiyaa irratti qabus hatattamaan akka sirreeffatu gaafatan.
Miseensonni Paarlaamaa kuni Gamataa Awurooppaa kan balaaleffataniif mootummaan Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf ajjeechaa geggeessaa turus hanga ammaatti Gamtaa Awurooppaa irraa tankaarfiin cimaan mootummaa Itoophiyaa irratti fudhatamuu dhabuu fi gamtichi Itoophiyaa keessatti mirga namoomaa kabajsiisuu dadhabuu isaatiif. Miseensonni Paarlaamaa kunniin mootummaa Woyyaanees sagalee cimaadhaan balaaleffataniiru.
Miseensonni Paarlaamaa Awurooppaa koree Mirga Namoomaa fi Misoomaa irra wolitti dhufan tankaarfiin Itoophiyaan mormitoota irratti fudhattu fokkisaa; akkasumas haalli biyyattii guyyaa guyyatti yaachisaa ta’aa dhufeera jedhu.
Miseensonni Paarlaamaa Awurooppaa kunniin rakkoon Itoophiyaa keessa jiru hatattamaan furamuu qaba jechuudhaan bakka bu’oota Gamtaa Awurooppaa fi Embassii Itoophiyaa irraa marii san irratti argamanitti himaniiru.
Dhiibbaan Paarlaamaa Awurooppaa irraa Woyyaanee qunname kuni kan hirriba isii dhoorgu ta’uu isaatiif shakkiin tokko hin jiru. Qabsoon itti fufa!
labsii paarlamaa awurooppa
Previous articleAddunyaan Woyyaaneetti dudda kennuu eegalte
Next articleBiyyoonni Dhihaa kana booda Woyyaanee irraa abdii hin qabaatu; Humna dantaa isaanii tiksuu hin dandeenne woliin wanti hojjatan tokko hin jiraatu